Ulwazi oluqokelelweyo usebenzisa magazini pa
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ulwazi oluqokelelweyo usebenzisa magazini pa
Ukuze umntu kuni o, ndicinga ukuba abanye abantu, nto leyo eza ifundwe lowu pa le. Kwiminyaka yakutshanje, hayi kuphela phephancwadi kuhlawulwa, iphepha free, njl ngokusebenzisana siganeko kwakhona iye kuphume lukhulu. Ezamahala iphepha, ngenxa yokuba Nowak simahla uye elibe fans, sikwancedela e ngaphantsi kwe kwityala lowu. Magazine of pa kolwazi igcwele sele uphumile inani elikhulu, kodwa imixholo eyahlukileyo.
phakathi kwabo, ndoxelelwa ngubani, zifake ingcaciso ngezinto kunye nolwazi imodeli le bayamanise ulwazi umngxuma of pa parlour sele inqununu kukho into eye yaba isifundo. Okokuqala, kweli phephancwadi ukuba model ulwazi sele isifundo, amathuba hit enkulu kunye nokuveliswa Xintai, nayo ukuthembeka, ezifana iindidi ingcaciso isiphumo kokuba sipapashiwe.
Ngaphezu kwako konke, kwimeko pa yeyona kakhulu ukuba isantya ojikeleza ngaso yewaka yen sele ithunyelwe. Obizwa ngokuba nomda, kodwa ke umda na, kuba ixabiso lenani ukuba kufuneka ikhutshwe ukubala amaxabiso ezahlukeneyo ngamanani ezifana big hit amathuba kunye linokuba ukwahluka ngokuqinisekileyo, kubalwa ngumsina.
In zegumbi pa apho ungaya, kodwa ndicinga ukuba ukuguqulwa ratio nganye yahlukile, nokuba umgca umda uya kwahluka komlinganiselo ngemali. Kungenxa kule phephancwadi, kukho kwakhona indawo ukhuphe izinga kwetu ngokwahlukileyo nomda, kuye kube lula kakhulu. Kwimeko
ipesenti kumatshini ekufakwa kuya kuba yinto enye. Kwimeko pa kukho uhlengahlengiso isikhonkwane, njl, akukho idatha umatshini eyabelwe kumatshini yahlula lohlukile. Noko ke, kule slot, ukusukela inani ngokufakelwa ukujikeleza azimisele, thina yokwahlulahlula umatshini sicinywa.
ingcono Kakade esisondele ku-100%, oko kuya kuba luncedo.
umlawuli we ukuthembeka Kakade ke, xa okunene hit kukuthi, niyazi ulwazi kwangaphambili ofuna, kodwa ngenxa yokuba kubalulekile ukuba hit ukwazi oomatshini nomda yeyona ilungileyo, olu lwazi kungcono ukuya pa engqondweni Ndicinga.
yaye emva koko, i iziganeko imagazini ngobuchule nolwazi Xintai of pa parlour uye waba inqununu. Olu hlobo phephancwadi ulwazi Kum, nokuba kwicala parlour pa nam ukuhlawula imali. Ngenxa yokuba nazo kuphela inani iziganeko ithunyelwe, uze kum ngenxa isiganeko okanye nje ukutsala abathengi ofuna iziganeko ukuba kukhonza ngokunyanisekileyo. Events
nto leyo iye yabonakalisa kwi imagazini hlobo yinto yokuba lo mcimbi ixabisa ukuwina. Kufutshane pa nakwesiphi na kuni, ukuba mna, zama ukuya ejolise kwi iziganeko zidweliswe.
ngaphezu iziganeko ngokuqhelekileyo zibekwa kwi-home page, ndicinga ukuba isikali xa kuthe ngasentla. Ngale magazini ulwazi ndlela, kufuneka iinkcukacha ezahlukeneyo ukuba uba lo mxholo phephancwadi. Ukuba ulwazi imodeli iqumrhu, qiniseka ukuba ukujonga nomda, ulwazi o parlour na iimagazini phantsi, zama ukuba Qiniseka ukukhangela siganeko.
ukusuka kwindawo ezahlukeneyo lwembono, ukuze abe elungileyo kwaye uzame oluninzi zokuqokelelwa kolwazi.